Izindaba - Ukulawulwa kukagwayi sekuyinto ejwayelekile emhlabeni jikelele, kanye nokubaluleka kogwayi bakagesi "ukunciphisa ingozi" kugqame
Njengamanje, njengoba umphakathi uya ngokuya uphishekela impilo enempilo, amazwe emhlabeni wonke aya ngokuya evimbela osikilidi bendabuko. Phakathi kwamalungu we-194 we-WHO, amalungu ayi-181 asayine ngokusemthethweni i-Framework Convention ngomhlakaUkulawulwa Kogwayi, ehlanganisa ama-90% wabantu bomhlaba. Amazwe kancane kancane akha izindlela zawo zokunciphisa intuthu noma ngisho nezinhlelo ezingabhemi.
Kodwa eqinisweni elingenakuphikwa, njengamanje kunabantu ababhemayo bendabuko abacishe babe isigidi esisodwa emhlabeni. Uma kungekho ezinye izindlela noma izithasiselo kweminye imikhiqizo ukuhlinzeka abathengi bendabuko bakagwayi ngezinketho eziningi kanye namathuba, kuzoba nzima kakhulu ukuthola ukuncipha kwamazinga okubhema noma ngisho nezinhlelo ezingabhemi ezenziwe amazwe ahlukahlukene. Ukuvela kwemikhiqizo kagwayi kagesi kugcwalise lesi sikhala ngomqondo othile.
Njengamanje, global ugwayi e-eimikhiqizo ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili: ayibhemi futhi ayibhemi ngokusetshenziswa kwayo. Phakathi kwazo, kunemikhiqizo yentuthu ngokwemigomo yokusebenza kwayo, engahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: osikilidi abasebenza nge-elekthronikhi kanye nogwayi kagesi ongashisi (HNB). Osikilidi abasebenza nge-elekthronikhi bakhiqiza igesi ngokusebenzisa uketshezi lwe-atomizing ukuze abantu babheme; Ugwayi kagesi we-HNB ukhiqiza igesi ngokushisa ugwayi, osondelene nentuthu yangempela. Mayelana nalokhu, osikilidi abane-elekthronikhi abahlukile empeleni kunogwayi bendabuko. Ugwayi kagesi we-HNB wehluka kuphela endleleni akhiqiza ngayo intuthu.
Ngakho-ke, ngalo mqondo, osikilidi abasebenza ngama-elekthronikhi abamele imikhiqizo kagwayi kagesi. Kulo mbiko, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela, imikhiqizo kagwayi kagesi ngogwayi abenziwe nge-elekthronikhi.
“Ukunciphisa ukulimala”Inani lentengo kagwayi emakethe
Kusukela yasungulwa ngo-2003, ugwayi e-eimikhiqizo ibhekane neminyaka engaphezu kweyishumi yentuthuko. Ifomu lomkhiqizo seliphelele ngokwengeziwe, futhi imisebenzi nesipiliyoni kuye kwathuthukiswa ngokuqhubekayo. Ikakhulu, izici "zokunciphisa ukulimala" zeu-e-cigarettes baye bathola kancane kancane ukuqashelwa kwezimakethe nezikhungo.
Uma kuqhathaniswa nosikilidi bendabuko, osikilidi abasebenza ngogesi abashi, abaqukethe itiyela, futhi aqukethe ngaphezu kwamakhemikhali angama-460 angadala izifo zokuphefumula nezenhliziyo lapho kushiswa osikilidi abajwayelekile, ngaleyo ndlela kuqedwe ama-carcinogens osikilidi abajwayelekile. .
Ucwaningo lwe-CDC e-United States lukholwa ukuthi okuqukethwe yi-nitrosamine metabolite NNAL eqondene nogwayi emchameni wabasebenzisi be-nebulized / vapor e-cigarette (ENDS) iphansi kakhulu, okungu-2.2% wabasebenzisi bakagwayi no-0.6% kagwayi ongenantuthu abasebenzisi. Ama-nitrosamines aqondene nogwayi yiwona abangela i-carcinogens enkulu kugwayi. Inhlangano yezempilo yaseBrithani nayo yathi uma iqhathaniswa nogwayi bendabuko, inganciphisa izingozi zezempilo okungenani ngama-95%. Kungashiwo ukuthi ukuphikisana phakathi kwezidingo zezempilo zabathengi bakagwayi bendabuko kanye namaphuzu obuhlungu bokuyeka ukubhema kuxazululwe ngezinga elithile.
UPan Helin, umphathi omkhulu we-Institute of Digital Economy yaseZhongnan University of Economics and Law, uthe isici "sokunciphisa ukulinyazwa" kwe-e-cigarettes yinani laso elikhulu, futhi imakethe inesidingo esinjalo, ngakho-ke intuthuko yayo iyashesha . Futhi uYao Jianming, onguprofesa eSikoleni Sezebhizinisi saseRenmin University of China, uthe imikhiqizo ye-e-cigarette isungulwe kakhulu emqondweni futhi ingenziwa ngendlela efanele, nayo ebaluleke emphakathini.
I-e-cigarettes inganciphisa izindleko zezindleko zezokwelapha
Izifo nemithwalo yezomnotho ebangelwe ukubhema bekuhlale kugxilwa emphakathini. Ngokombiko we-2018 we-Action for Smoking and Health e-United Kingdom, izindleko zase-UK zaminyaka yonke ngenxa yokubhema zifinyelele kumakhilogremu ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-12.6, kufaka phakathi iBritish National Health Service (NHS) yezindleko zezokwelapha nezempilo cishe ezingamakhilogremu ayizigidi ezi-2,5.
E-United States, ngokusho kwendatshana ethi "Annual Healthcare Spending Attributable to Cigarette Smoking: An Update" eyanyatheliswa ngo-2014 yi-American Journal of Preventive Medicine, ukuhlaziywa kwezindleko zezokwelapha kusukela ngonyaka ka-2006 kuya ku-2010 kwathola ukuthi u-8.7% wezindleko zezokwelapha zonyaka i-United States inganikela ngokubhema, kuze kufike ezigidini ezingama-170 zamadola aseMelika ngonyaka; ngaphezu kuka-60% wezindleko ezibhekelekayo zikhokhelwa yizinhlelo zomphakathi.
E-China, umbiko we-National Health Development Research Center we-National Health Commission waveza ukuthi umthwalo wezomnotho wezifo ezihlobene nogwayi ezweni lami ngo-2018 wawuyi-3.8 trillion yuan, elingana no-4.12% we-GDP yalowo nyaka; okungukuthi, i-83.35% yayingumthwalo wezomnotho ongaqondile, okungukuthi, Ukulahleka komkhiqizo komphakathi, kufaka phakathi ukukhubazeka nokufa ngaphambi kwesikhathi.
Ngasikhathi sinye, izifo ezihlobene nogwayi zisebenzisa cishe i-15% yemithombo yezokwelapha yezwe lami. Uma sithathwa njengesifo, khona-ke singabekwa endaweni yesibili.
Ngakho-ke, ngokunciphisa inani labathengi bakagwayi bendabuko ngokusebenzisa i-e-cigarettes, izindleko ezisetshenziswayo zezindleko zezokwelapha nezinye izindleko zenhlalo zizoncishiswa ngokufanele. I-British Health Organisation ithole ukuthi i-e-cigarettes ingakhuphula izinga lokuphumelela lokuyeka ukubhema cishe ngama-50%. Kungakho i-UK inesimo esihle ngokuya ngemikhiqizo kagwayi kune-US. I-United Kingdom ne-United States yibona abathengi abakhulu bakagwayi abenziwe ngama-elekthronikhi emhlabeni. I-United Kingdom isekela i-e-cigarettes njengomkhiqizo wababhemayo bendabuko ukuyeka ukubhema noma ukunciphisa ukulimala kogwayi bendabuko.
"I-Industrial chain + brand" idonsa ngamasondo amabili ukukhulisa inani lezimboni
Ngokombono wamathrendi entuthuko yomhlaba, isikali semakethe ye-e-cigarette siyaqhubeka nokwanda futhi isabelo sayo siqhubeka nokukhula. Izinkampani ezine ezinkulu zikagwayi emhlabeni, iPhilip Morris International, iBritish American Ugwayi, iJapane Ugwayi, kanye ne-Imperial Tobacco zihlala emakethe ngokuthola nokusungula izinhlobo zayo; Njengamanje, imikhiqizo yayo ye-e-cigarette (kufaka phakathi i-e-cigarettes, HNB e-cigarettes) ilinganisela ingxenye yemali efinyelelwe ku-18.7%, 4.36%, 3.17%, 3.56% ngokulandelana, okukhombisa ukuthambekela okukhulayo.
Yize imboni yase-e-cigarette yaseChina iqale sekwedlule isikhathi, inezinzuzo ochungechungeni lwezimboni. Izinkampani zama-e-cigarette zaseChina zisesikhundleni esiholayo ngokuphelele maphakathi naphezulu ekufinyeleleni kochungechunge lwezimboni. Njengamanje, sebenze uchungechunge oluphelele lwezimboni kusuka kubahlinzeki bezinto ezingasetshenziswanga ezikhuphukayo ukuya phakathi kwabakhiqizi be-e-cigarette nabakhiqizi, nezinkampani zokuthengisa ezisezansi Lokhu kuvumela ukusatshalaliswa okusheshayo kwemikhiqizo yizinkampani zama-e-cigarette zaseChina kanye nokuqhamuka kwendlela yokukhiqiza ehlanganisa i-R & D, ukuklanywa nokukhiqizwa.
Ngasikhathi sinye, ngoba ama-e-cigarettes ngokusobala aqhutshwa ubuchwepheshe nemikhiqizo, futhi izinkampani zaseChina zivame ukunaka kakhulu ulwazi lwabathengi, lokhu kuzoguqulwa kube izinzuzo zemikhiqizo yama-e-cigaretti yaseChina, engashesha qonda ukusetshenziswa emazingeni ahlukene ezomnotho nezindawo zamasiko phesheya kwezilwandle. Izidingo. U-Yao Jianming ukholelwa ukuthi ukwenziwa kwempahla yomhlaba wonke kumele kuqala kuhambisane nemikhuba yokuphila kwasendaweni, amasiko, amasiko, njll., Ukuze kuvulwe imakethe yamazwe omhlaba.
Kulezo zinkampani zama-e-cigarette aseShayina eziguquke zivela ezinkampanini ze-Intanethi, zingaqhutshwa yisipiliyoni sabasebenzisi, zinhle ekuhlanganisweni kwamaketanga ezimboni, futhi imikhiqizo yazo ingafinyelela ukuphindaphindwa okusheshayo, okusobala ukuthi kusiza ekwandiseni kwabo imakethe yamazwe omhlaba. Njengamanje, i-RELX, umholi kulo mkhakha eChina, ingeniso layo laphesheya elibalwa u-25% wemali engenayo isiyonke futhi isakhula.
Ngakho-ke, ngokungafani nemikhiqizo ye-smartphone efana neXiaomi neHuawei, engakha izinzuzo zomkhiqizo ovuthiwe ngemakethe yabathengi eqinile yasekhaya kanye nezixuku ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle, ama-e-cigarettes aseChina awanazo izimo ezinjalo ngaphansi kwethonya lezinqubomgomo. Uma kulo mongo, uma ukuphatha kufanelekile, nomkhiqizo wase-e-cigarette waseChina usengakha ukuqwashisa okuqinile komkhiqizo phesheya kwezilwandle, kuzoba yisethenjwa esihle seminye imikhiqizo yamaShayina ukuya phesheya.
Ngale ndlela, ukuthembela ku "motor chain + brand" drive-wheel drive kuzokwazi ukufeza ukukhushulwa kwenani lama-e-cigarettes aseChina ochungechungeni lwezimboni zomhlaba.
Ukwesekwa okufanele kwemikhiqizo ye-e-cigarette ukuthuthukisa inani labo lokuhweba langaphandle
Ngokuya ngesimo esikhethekile seChina sezimboni, imakethe yamanje ye-e-cigarette iye yakha iphethini "Yenziwe eChina, Ukusetshenziswa eYurophu naseMelika". Ngo-2018, osikilidi bakagesi abenziwe eChina baba ngaphezu kuka-90% wenani lomhlaba jikelele, kwathi ama-80% awo athengiswa ezimakethe zaseYurophu nezaseMelika. Ngokwemininingwane yeLeyi, ngonyaka wezi-2019, amazwe kanye nezifunda ezingama-218 emhlabeni wonke zithenge ama-e-cigarettes avela eChina, kanti inani laseChina lokuthumela emazweni angaphandle lalingama-yuan angama-76.585 billion.